Arrimaha in uu keeni karo drive failure adag
In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada teknoolajiyada cusub iyo sare ayaa la horumariyey si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ku haayo zone raaxada si ay u dareemaan dejiyo ee wax soo saarka farsamada casriga ah ee la isticmaalo. Laakiin inkastoo waxaas oo dhan arrin ama la hubin iyo unreliability jira iyo waxa uu sababay farsameeya in la dhiso waxyaabaha ay tahay in ay yihiin isku halayn karo oo keliya ma aha, laakiin sidoo kale waafaqsan tahay shuruudaha isticmaala. Drive Hard sidoo kale waa wax soo saarka casriga ah oo loo isticmaalo dadka isticmaala ay ka adduunka oo dhan in kumbiyuutarada, laptops iyo xitaa palmtops hadda la socotid dhexdhexaad ah lagu kaydiyo. Waxa jira arimo badan oo keeni in arrimaha adag drive iyo fashilaad iyo ugu badan oo iyaga ka mid ah waxaa ku qoran sida soo socota.
Waxa kale oo loo arki karaa gardarrada saarayaasha oo ay tahay mid ka mid ah sababta ugu weyn ee macaamiisha ku faraxsaneyn marka ay timaado shirkadaha casriga ah, kuwaas oo. A brand cusub disk adag lagu rakibay waxaa sidoo kale akhriyin nidaamka ama waxa bidbidayaan dhowr maalmood ah ka dib markii la rakibey. Firmware unu inkasta oo aan ahayn wax caadi ah si ay u yaraato dhacaan. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee arrintan waa gaarsiinta hardware oo aan imtixaan.
Sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha la gaaray user haddii waxa farqi u awood daran ama korontada korodha. Sababta ugu weyn ee arrintan been dhamaadka user ee iyo in lala socdo ma awoodi kara inay bixiyaan sahayda awood buuxda si ay PC ka. Sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha keentay in soo saarka ee laptops. FARAKUHAYNTA waxaa la bedelay si dhaqso ah ay suuragal tahay in la hubiyo in arrinta fadhiya u user.
Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha oo user masuul ka yahay. Siyaabo akhlaaq daro ah oo ay xiraan computer ama sii deeruhu in il awoodeed ee waqti dheer uu keeni karo arrintan. User waa in loo soo dajiyo ah antivirus diiwaan gashan si ay u hubiyaan in arrinta la xalin iyo nidaamka waxaa sidoo kale xilliyo si toos ah la marsiiyey. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in sida ugu fiican loo dhiibaa u user iyo nolosha drive kordhay adag.
Calaamadaha in soo jeedinaya drive failure adag
Ilaalinta ee aragtida sababo in lagu kor lagu soo sheegay ka dib markii qaar ka mid ah calaamadaha ah in ay soo jeedinayaan in ay gaari ku adag yahay inay Fashilaan ama shil inay u badan saxda ah:
Drive The adag aan la ogaan nidaamka oo dhan.
Habka booting waxay qaadataa waqti aad u dheer si uu u dhameystiro.
BIOS uusan awoodin in uu ogaado drive adag.
Drive The adag ma awoodo inuu ayna miiqdaan si haboon.
Files muhiim ah oo ku saabsan nidaamka aan la akhriyi by drive adag.
Files heli musuqmaasuq ay sabab u tahay awood-kaca ah iyo sabab la mid ah aan la ogaan.
Lama filaan ah failure drive adag sidoo kale waa mid ka mid ah kiisaska in dhaqmaan sida calaamad ama astaan ​​arrintan la xiriira.
Maxaa la sameeyaa markii fashilaad drive adag dhacdaa
User wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in talaabooyinka ku habboon ayaa laga qaadayaa in arrintan la xiriira si loo hubiyo in arrinta la xalin danta ugu fiican ee nidaamka si madadaalo ama shaqada la riyaaqay laga yaabaa. Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka la qaadi karo si looga fogaado ka kaaftoomi mustaqbalka:
Kabsado faylasha aad lumay drive failure adag
Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican oo loo hubiyo in ugu fiican waxaa loo dhiibaa users ee arrintan la xiriira. Isticmaalka barnaamijka waa mid aad u fudud oo ka dhan ah qadar yar shirkadda, waa qurbaan la casriyaynta liisanka uu nool yahay oo lacag la'aan ah ilaa iyo inta software-ka loo isticmaalo. Waxay leedahay muuqaalada in la qalo karaa iyadoo la kaashanayo dul mouse kaliya oo sabab la mid ah waxa loo isticmaali karaa oo dhan isticmaala iyo xataa xirfad laawe ah ka dhigi kara isticmaalka buuxa barnaamijka inuu ka soo kabsado xogta si fudud.
Dayactirka drive adag
Ka hor inta qaadashada go'aanka bedelay drive ay adag tahay geedi socodka soo socda waa in lagu dabaqo si loo hubiyo in tallaabada la soo dhaafay ayaa sidoo kale soo qaaday in la dayactiro hardware ah. Qaar ka mid ah tallaabooyinka ku jira waa sida soo socota:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in drive ay ku adag tahay la ogaan nidaamka BIOS ah:
ii. Drive The adag tahay in la si loo hubiyo in lagu tijaabiyo dhaqaaqin madax si ay codadka la maqlo iyo dib u furay.
iii. Laga yaabaa in Talaabadani waxay la arkaa macquul ahayn qaar ka mid ah dadka isticmaala, laakiin qaboojiye drive ka adag tahay dhowr saacadood ayaa sidoo kale loo xaliyo arrinta iyo drive adag noqdo hawl-mar kale.
Marka laga reebo, kuwaas oo isticmaala ayaa sidoo kale hubin karaa in in drive adag la geliyo nidaamka kale iyo haddii la shaqeeya waxaa ganaax ka dibna waxa ay ka dhigan tahay in arrinta la seexda nidaamka iyo motherboard waa in la hubiyaa in arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in arrinta la xalin gebi ahaanba. Waxa kale oo xusid mudan in haddii habka halkan ku xusan dhamaan qiiq ka dibna ka hor badalay caawimaad drive adag xirfadeed waa in la dooneen si loo xaliyo arrinta buuxda.
Disk adag beddel
Haddii disk adag ayaa la hubiyaa si fiican oo aan jid lahayn soo baxay taas oo horseedaysa kulankii markaas geedi socodka soo socda waa in la raaco si loo hubiyo in drive adag waxaa bedelay iyo arrinta la xalin si buuxda u ogolaanaya user in ay la qabsan hawlaha la xidhiidha nidaamka:
i. User wuxuu u baahan yahay si aad u iibsato baabuur cusub oo adag:
ii. Bogga kooxda computer waa in la furay si ay u hubiyaan in fiilooyinka gudaha la kulmin,
iii. The boolal kiiska drive adag yihiin in la furay:
iv. The saldhig oo drive adag tahay in lagugu xiro dekedaha saxda ah iyo drive adag tahay in la riixay in kiiska si uu u dhameystiro nidaamka:
Habka kor ku xusan waxaa kaliya in la raaco haddii drive adag loo isticmaalay PC guriga ama kaliya ujeeddooyin madadaalada. Waxaa lagu talinayaa in aad hesho gargaar xirfadeed arrintan la xiriira haddii drive adag ayaa xog aad u xasaasi ah oo la isticmaalo ujeeddooyin kale sida kuwa sharci ah. Waxay keeni laga yaabaa in ay dhibaato arrinta iyo dadka isticmaala haddii geedi in lagu kor ku xusan ay ku guuldareysato ay sabab u tahay si xun u maaraynta taas oo user waa mas'uul.
> Resource > Hard Drive > Waxa la sameeyo marka aad ku xanuunsado drive failure adag